haterina any Fonjaben'i Tsiafahy Antananarivo, ny alin'ny 03 aprily 2020, araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena. Sarona tao Andilamena ireto mpimasy malaza ratsy ireto, dia Soamila, nonina tao Andilamena, tratra ny 30 martsa ; Liva-mpimasy, nonina tao Andilamena, tratra ny 02 aprily ; Koto, nonina tao Behorefo, tratra ny 02 aprily. Ny famotorana nataon’ny Zandarimaria tany an-toerana dia nanamarina fa mpanafina sy mpiray tsikombakomba amin’ireo dahalo manafika sy mampijaly vahoaka any amin’ny faritra Andilamena sy ny manodidina azy iny izy telolahy ireto. Noho izany dia nahazo didy avy amin'ny Fitsarana ambaratonga ambony ny Vondron-tobim-paritry ny Zandarimariam-pirenena tao Andilamena mba hanatitra ireo mpimasy ireo hotanana vonjimaika any Tsifahy. Niainga tao Andilamena izy ireo ny harivan'ny 03 aprily 2020. Teny an-dalana mihazo an'i Andilanatoby dia nitsambikina tampoka avy eny ambony fiara pick-up nitondrana azy izy telolahy, nararaotra ny lalana ratsy sy ny andro alina ka nandositra. Nasaina nijanona tamin’ny alalan’ny antso sy tifi-danitra fampitandremana izy ireo fa tsy nety, angamba nanantena fa haaro azy ilay voalazany fa ody bala. Koa voatery nitifitra ireo zandary. Tamin’izany no nahalavo azy ireo. Manaporofo ny maha olon-dratsy ireto mpimasy ireto ny fandosirany, hoy ny zandary. Ny fahafatesan’ireto mpimasy ireto, izay malaza fa mpanao ody bala, dia manaporofo ihany koa fa tsy misy izany ody bala izany fa fisolokiana sy famitahana olona fotsiny izany, hoy hatrany ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena.